ဇွန် 2018 |5၏စာမျက်နှာ 109 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » ဇွန်လ (စာမျက်နှာ 5)
ရာထူး: Video Editor ကုမ္ပဏီ: Rockstar က New York တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန် Rockstar Games ကအမြင့်ဆုံးစံဖို့ဂိမ်းရိုက်ကူးတည်းဖြတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းအမြည်းကိုဖမ်းယူဖို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သူတစ်ဦးမြင့်မားနိုင်စွမ်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာကိုရှာဖွေနေသည်။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒရာမာနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုမှလက်မှုပညာနိုင်ခဲ့နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ် ...
ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာ, YouTube ကို TV က
ရာထူး: ဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာ, YouTube ကို TV ကကုမ္ပဏီ: Google ကတည်နေရာ: Mountain View, CA အမေရိကန်မှတ်ချက်: သင်၏လျှောက်လွှာကိုအလိုအလျောက်အောက်ပါနေရာများမှတင်သွင်းနေသည်ဒီအနေအထားမှလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်: စန်းဘရူနို,, CA, USA, Mountain View, CA, USA, ဆီယက်တဲလ်, WA, အမေရိကန်နိုင်ငံ YouTube ကိုတီဗီရဲ့ linear Infra အဖွဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စကေးမှာ linear တီဗီ feed ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့် operating များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ...
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု Validation အင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: ထုတ်လုပ်ခြင်း Validation အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Thermo Fisher ကသိပ္ပံတည်နေရာ: San Jose, CA ကိုအမေရိကန်ကယောဘဖျေါပွခကျြသငျသညျ Thermo Fisher ကသိပ္ပံကို join အခါ, သငျသညျရှာဖွေရေးနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန်မျှဝေတဲ့စမတ်, မောင်းနှင်အသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ $ 20 ဘီလီယံဝင်ငွေနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် R & D အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကလူအရင်းအမြစ်ပေးနဲ့ ...
စစ်မှန်သောရူပါရုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူထိုင်းရဲ့ပထမဦးစွာ 4K UHD ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်လွှမ်းခြုံဘဝမှကယျတငျ
, စစ်မှန်သောရူပါရုံ, ထိုင်းတစ်ဦးဦးဆောင် cable ကိုများနှင့်ဂြိုဟ်တုအော်ပရေတာ 24K က Ultra HD မှာယခုနှစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘောလုံးချန်ပီယံထုတ်လွှင့်ရန်၎င်း၏မြင်ယောင်ကြည့်ဆက်သွယ်ရေးပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်တိုးချဲ့ထားပါတယ် - ပလေးအောက်ကွန်ယက်နယူး extension ကို 26 နာရီဘောလုံးလွှမ်းခြုံစင်္ကာပူ, ဇွန်လ 2018,4များအတွက်အဆောက်အဦကိုထောက်ပံ့ပေး ။ ဤရွေ့ကား, South East Asia အတွက်ပထမဦးဆုံးက Ultra HD ကိုရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် ...
စဉျးစားကွညျ့ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အရှေ့တောင်အာရှတီဗီမှာခိုင်မာတဲ့ Turnkey ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ပေး
ဆော့ဖျဝဲ-defined tools တွေကိုစင်္ကာပူပေါ်အခြေခံပြီးခေတ်သစ် automated ပလေးအောက်ပလက်ဖောင်းမှထုတ်လွှင့်ရွေ့လျားဇွန်လ 27, 2018 - ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘောဒီးယား၏နိုင်ငံတော်၌အခြေစိုက်အရှေ့တောင်အာရှရေဒီယို & ရုပ်မြင်သံကြားခြင်း (SEA တီဗီ) အတွက်ပလေးအောက်စစ်ဆင်ရေး updated သိရသည်။ အသစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို-based, အလိုအလျောက်ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ရှိပြီးသား "ချန်နယ်-in-a-box ကို" စနစ်ကအစားထိုးထားသည်။ အရှေ့တောင်အာရှတီဗီရဲ့အဆင့်မြှင့်ပလေးအောက်ပတ်ဝန်းကျင် '' ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်အခြေခံသည် ...
Dejero, မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ဝေးလံသောနေရာများတွင်ဖြစ်ပါသည်စဉ်ကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများကိုမိုဃ်းတိမ်ကို-managed ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဆန်းသစ် - တော်လှန်ရေးသမားဆက်သွယ်မှုနည်းပညာပံ့ပိုးအတွက်ဆာ, Dejero ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှု၎င်း၏ရူပါရုံကိုဘယ်နေရာမှာမဆို Waterloo, အွန်, ဇွန်လ 27, 2018 ဖြည့်ဆည်းရန်မောင်းထုတ် ယင်း၏ 10 နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပနေ။ ဤသည်နှင့်အတူ Bogdan Frusina ဇွန်လ 2008 အတွက်ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခြေတစ်လှမ်း ...
ITV စုစည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာန်ဆောင်မှုများအတွက် TVT ရွေးချယ်
ဗြိတိန်ရဲ့အကြီးဆုံးစီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန် TVT ရဲ့အဆုံးမှအဆုံးသို့စွမ်းရည်သို့ပုတ်သဘောတူညီမှုရဗြိတိန်နှင့် ITV ကို Global Entertainment ကချောမွေ့စွာအားလုံးကို ITV အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးဘို့ထူးခြားတဲ့, စုစည်းပလက်ဖောင်းအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုခရီးလန်ဒန်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီး , 28 ဇွန်လ 2018 - TVT, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုပေးသူ, ကရှိတယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ် ...
စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ... ပေါ်ထွက်လာစတင်
"ငါသည်အချို့စကေးပေးရန် foreground တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ " Hooper တို့ "မေးရိုး," Zanuck / ဘရောင်း Productions, 1975 တစ်သိုလှောင်မှုလူတစ်ဦးရဲ့နှလုံးဟာစည်းချက် ... သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကျော်သွားကြည့်ဖို့လိုပါသလား? ပင် Flutter? ကိုယ့်ကိုသူတို့အမှန်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားရ !, VR နဲ့ Bam ဖော်ပြထားခြင်း။ Creating (အကြီးမဟုတ်လျှင်) ကောင်းသော VR အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူလာပြီဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲဖြစ်စေ ...